isifo Periodontal, noma ngamanye amazwi, pyorrhea alveolar - kuyinto isifo esingelapheki lapho abavusa labo nezicubu azungeze amazinyo. Ngokuvamile-ke ekuthonyweni abantu abadala kanye oseqinile, kodwa futhi ezinganeni, intsha. Ikakhulukazi abathintekayo yilabo abaphila kwezimo abasebenza ngaphansi kwazo ukusweleka nezithelo nemifino eminingi, futhi ngenxa yalokho, amavithamini (eNorth). Abahluphayo imizwa nemithambo yegazi kuholela periodontal izicubu ukungondleki emhlabeni izinyo futhi isifo periodontal kwenzeka. Izimpawu ze-ke kungase kubonakale ngenxa ngokweqile amazinyo aseleyo emva isusiwe sele atjhabalalise, kanye khona Clumps tartar. Ivame zibekwe izikhala phakathi kwamazinyo izintamo zabo, okungukuthi bakuphi bebodwa kungukuthi bahlanza ngesikhathi ukuhlafuna ukudla.
Kanjani isifo periodontal? Izimpawu zesifo ekuqaleni - lokhu ziba ngcono amazinyo ngenxa ithambo resorption izicubu lunochek. Kungaba azithalalise noma kuhambisane yezwakala elincane izinsini, esivuthayo, ukulunywa. Inqubo kungenzeka wasithatha esifundeni eyodwa izinyo noma amaningi. izimpawu kwesikhathi yesifo periodontal okucacile ngaphezulu: izinsini babe edematous, iluma njalo opha lapho ukudla okuqinile phakathi yokuhlanza yabo. Intamo selibekiwe namazinyo angenalutho kubonakale. Lapho umkhankaso isifo periodontal, izimpawu ubufakazi bakhe yezinkinga we gingivitis isifo. Lokhu ukuvuvukala izinsini, which they zigcwala, abe buhlungu, efihlekile babo elise phakathi kwamazinyo ukopha. Lapho catarrhal gingivitis sengezwe kanye namandla ukulunywa izinsini. Lapho kukhona ukugula concomitant noma amasosha omzimba aphansi abantu, kube luyindida ukuvela izilonda, ubomvu kusukela alveoli, ukuvela emlonyeni iphunga ohambelana, okulinganayo enkulu izimpande amazinyo futhi ziba ngcono zabo. Ngenxa yalokho, bangase fall out, ngisho noma uphile kahle ngokuphelele ngokubukeka. Eshiswa can namazinyo amabili noma amathathu, futhi mhlawumbe lonke emaphethelweni izinsini.
Indlela ukwelapha isifo periodontal? Inqubo kufanele kube oluphelele, ne indlela ngamunye isiguli ngasinye. izinyathelo zokwelapha ebekwe udokotela, udokotela wamazinyo, kudingeka ulandele ngokuqinile. Okokuqala kubalulekile ukususa tartar futhi aphathe izinsini. Khona-ke yenzani emkhakheni wezitho zokwenziwa ulahlekile namazinyo kanye nokuqinisa umzimba wonke. Futhi parallel kufanele luphathwe izifo concomitant ezingamahlalakhona.
ukusetshenziswa Independent noma yimuphi umuthi noma ngezinye izindlela (caustic ikakhulukazi) akuvunyelwe nhlobo. Udokotela wakho angase akukhuthaze ekhaya kuphela uxubha umlomo nge ukumnika oki namagxolo, chamomile noma itiye nje strong (Yiqiniso, ngaphandle ushukela).
isifo Periodontal kanye nokwelashwa yayo - inqubo eside, njengoba lesi sifo esingelapheki. isikhalazo esifike onguchwepheshe ikani isikhathi eside ukuyeka inchubekelembili yayo.
Nokho kungcono ukuthatha izinyathelo zokuvimbela phambi asesebenzisa ukunakekelwa ngezokwelashwa esikhathini esizayo. benjalo, okokuqala kunakho konke, ukushintsha uhlobo ukudla, wathola nsuku zonke. Ingxenye ke kumelwe abe lukhuni, ngoba kunomthelela uhlikihla izinsini ngokwemvelo nokususwa ungazange iselukhuni tartar imali. Kungcono ukuba kusebenze, ophela ukusetshenziswa isiphi isidlo semifino iluhlaza noma izithelo (currants, apula, izaqathe, njll), Yikuphi futhi aqukethe amavithamini abalulekile. Futhi kuvimbela ukuthuthukiswa isifo periodontal emkhakheni wezitho zokwenziwa ngesikhathi esifanele, ke kuyosiza kususe umsebenzi ne ukuhlafuna amazinyo ukuthi bahlale ngalo ingaphakathi ngomlomo. Desirably, ngamunye ephelezelwa yokuhlanza wabo uhlikihla izinsini. Udinga uhlikihla kubo imizuzu emithathu kuya kwemihlanu, okwenza ukunyakaza phansi, bese phezulu ngesikhathi esifanayo iminwe futhi kwesokunxele bese ngakwesokunene. Ngemva amazinyo nezinsini nomkhombe kumele kahle siyakazwe umlomo okukhulunywa infusions ngaphambili noma Union evunyiwe ejenti kwamazinyo.